tamin’in fidinana mihazo ny Sekoly Paon d’or iny. Fiara marika Sprinter iray no namoa-doza, izay sokajiana ho noho ny tsy fitandremana. Nijanona teo amin’ny fidinana io fiara io, ka tsy nasiana “frein à main”, raha ny fanazavana. Nivoaka anefa ny mpamily hanala entana, ka nikorisa ny fiara, hany ka voafaoka ireo zaza roalahy teo aloha tsy nanam-po na inona na inona. Vetivety dia tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana, hany ka voasoroka ny fitsaram-bahoaka, na dia maro aza no efa nanomboka niaka-pofona, raha ny vaovao voaray mahakasika ity toe-javatra nampalahelo ity. Mirary fiononana ho an’ny fianankavian’ny namoy ny ainy. Ankoatra io, dia fiara sprinter iray mampitohy Antananarivo-Toliara ihany koa no nivadika tany amin’ny lalam-pirenena faha-7, sahabo ho 30 km tsy hidirana an’i Fianarantsoa ny sabotsy teo ihany, vokatry ny erik’andro. Teny am-piaingana teny amin’ny toby fiantsonana Fasankarana izy io dia efa voalaza fa nisy olana. Nitsikasina teo antsisin-dalana, izay soa ihany fa tsy nisy aina nafoy. Ireo naratra kosa nalefa tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Fianarantsoa.